Ny toeram-pialan-tsoavaly Bled dia hita ao amin'ny toerana mahafinaritra mahagaga, anisan'ireo ala voaaro, akaikin'ny farihy glasy mitovy anarana. Manintona ireo mpizahatany amin'ny toetr'andro milamina, fialamboly samihafa. Amin'ny ririnina, i Bled dia lasa paradisa hoan'ireo tia ski. Ao amin'ilay toeram-pitsaharana dia afaka mihaona ireo mpizahatany amin'ny sokajy sy ny sokajy samihafa. Tian'ny olona ny skiing, ny sasany dia tia miala sasatra, mitsiky amin'ny natiora eo an-toerana.
Inona no fantatra momba ny toeram-pialan-tsoan'i Bled?
Ny toeram-pialan-tsoavaly Bled dia eo amin'ny 645 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina, 50 km miala an'i Ljubljana . Amin'ny bus izay mihazakazaka imbetsaka isan'andro, dia afaka mankany amin'ny toeram-pisakafoanana any Bohinj ianao . Ny tena mampiavaka an'io toerana io dia ny fisian'ny mpizahantany amin'ny fahavaratra mba hananana fitsaboana mahasalama noho ny fisian'ny loharanon-drano.
Nosokafana tamin'ny 1856 ny Bled Resort, saingy nanjary nalaza tany amin'ny taonjato faha-21. Bled dia malaza amin'ny asany tsara sy fitaovana tsara. Ny tombontsoa lehibe amin'ity toeram-ponenana ity dia mety ho an'ireo izay mianatra ski ihany. Azonao atao ihany koa ny miaraka amin'ireo ankizy izay nahitana programa manokana.
Tsy hita eto ny lalam-pikarakarana. Ny toeram-pialan-tsambo Bled dia mety kokoa amin'ny fialamboly sy fialamboly noho ny fampiofanana matotra. Ny fisian'ny fiantsonan'ny lisea sy ny mpampianatra matihanina dia manana fahalalana lalina amin'ny skiing.
Ny toeram-pitsangatsanganana dia misy rafitra ranomandry, ary koa ny jiro manaitra. Ireo lalana, na dia tsy matihanina aza, dia manana fahasamihafana isan-karazany. Ao anatin'izany dia misy tsipika miavaka ho an'ny ski skiing hafa. Misy fiarandalamby roa: karazana lamba iray, ary sambo fiara faharoa. Rehefa mihomehy ny skiing, afaka mifindra any amin'ny lalam-baravarana misy riandrano ianao.
Bled - toeram-pialan-tsambo, toerana ahafahana miala sasatra amin'ny ririnina maro. Ny halavitr'ireo làlana eto dia 1 km, ary ny halavan'ny manga sy mena dia mitovy amin'ny 500 m. Ny halavan'ny làlana amoron-dalana dia 15 km. Toy ny any amin'ireo toeram-pilalaovana maoderina, ao Bled dia misy fotoana ahafahana maka fitaovana hividianana.
Fiantohana ny toeram-ponenana
Ny hotely kintana 3-4 dia miorina eo amin'ny morontsiraka atsinanana, ary amin'ny andrefana dia ho afaka hipetraka ao amin'ny toeram-ponenana. Ankoatra izany, misy safidy hanofa trano manokana. Ny toeram-ponenana dia manana hotely malaza sy trano fandraisam-bahiny demokratika. Noho izany, ny vidim-piainana dia tsy tonga sakana amin'ny fitsidihana ny toeram-ponenana. Ny olona rehetra dia afaka mahita ny safidy tsara indrindra.
Toy izany ihany koa amin'ny sakafo, satria misy toeram-pisakafoanana malaza ao Bled, ohatra "Panorama". Afaka manandrana ny sakafo Slovaky ianao ary hankafizinao ny fomba fijery mahafinaritra momba ny farihy. Ny zavatra tsy maintsy atao any amin'ilay toeram-pitsangatsanganana dia ny hanandrana ny mofomamy Kremna rezina. Ity dia kisoa lava vovobony eo amin'ny boaty mofomamy.
Ny tranonkala ofisialin'ilay toeram-pitsangatsanganana dia manolotra karazana fonosana isan-karazany, anisan'izany ny tsy fisian'ny skiing, fa koa ny mitsidika ny manodidina ny manodidina. Hatramin'ny volana desambra, any amin'ny toeram-ponenana sy ny tanàna misy ny anarany, eo akaikiny, misy hetsika mahaliana maro natao. Ohatra, ny milina fandatsaham-bato iray milomano dia mametraka, hira natokana ho an'ny Krismasy.
Misy bus mitondra an'i Ljubljana , saingy afaka maka taxi na manofa fiara ianao. Ny fitateram-bahoaka dia miainga avy ao amin'ny gara. Eto dia misy fiatoana taxi. Afaka mankany amin'ny lamasinina ianao, ny fiantsonana akaiky any Lesce- Bled . Fa 4 km avy amin'ny Bled.
Katedraly Notre Dame de Luxembourg
Ny mariazin'i Ian Somerhalder sy Nikki Reed
Ticks in alika - fitsaboana any an-trano
Ahoana ny fomba hampiasana tsindry alikaola?
Plectrantus - famantarana sy finoanoam-poana
Taom-baovao tao Goa
Fanazaran-tena amin'ny barazy tsy misy dikany
Ahoana ny hihaonan'ny lehilahy avy amin'ny tafika?
Jennifer Aniston: eo amin'ny fiainan'ny mpikarakara dia misy ny fiantrana!
Diana Kruger mikasika ny fanorisorenana ara-nofo amin'ny lehilahy: "Nanolo-tena ho takalon'ny sary aho"
Prevention of grippy pigs in children
Soup miaraka amin'ny croutons
Hihaino ny Hills ho an'ny kambana
30 saka izay nikomy tamin'ny Krismasy